Joined: 26 Aogositra 2015, 08:39
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by jimos » 02 Nov 2017, 10:50
Misy olona eto izay afaka manamboatra fiaramanidina ho an'ny fiarahamonina? Mitady olona aho hamolavola propagandin'ny lava fiara lava mety ho afaka mitondra entana / Pax amin'ny halaviran'ny 3500 NM Raha haingana dia haingana. Tiako hampiasa izany ao amin'ny Air hauler 2 ka ny MTOW dia heveriko fa tsy afaka mandeha mihoatra ny 3 tapitrisa angamba, Raha misy afaka manampy dia avelao aho hahafantatra, afaka mampakatra azy any amin'ny rikooo ho an'ny olon-drehetra ampiasaina?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 15 feb 2018, 00:35
Salama, eny afaka manampy anao hampiasa fiaramanidina efa ampiasanao aho ary hampiseho aminao ny fomba fanitsiana ny fisiean ny habakabaka cfg hampitombo ny elanelana sy ny hafainganan'ny fiaramanidinao. Raha mbola tsy nanokatra fisie fisie ianao vao hitady dia miankina amin'ny dikanteny inona izany P3D ianao dia manana. Ny dikan-teny 1,2, ary ny 3 dia tokony ao amin'ny Program x (86) ao anatin'ny solosainao. Raha manana ianao P3Dnapetraka v4 dia hita ao amin'ny fenitra nataonao Folder folder eo ambanin'i Lockheed Martin. Izao dia mila fantatro raha prop na jet ny mpitaingina anao. Raha prop izy dia mila fantariko raha kinova turbo izany. Raha tsy misy an'ity fampahalalana ity dia ohatra iray fotsiny no hitarihako anao: handray motera 2 mahazatra aho hampiasaina io exorcise io. Vantany vao nosokafanao ny Folder Lockheed Martin, midina mankany simobjectssokafy, sokafy ary dia hahita ny fiaramanidinaS folder, sokafy izy ary tadiavo ny fiaramanidina tianao hovaina. Vantany vao nosokafanao ny fampirimana fiaramanidina nofidinao dia hisy ny tsenan'ny rakitra fiaramanidina cfg . Raha sambany ianao nanokatra fisie file, tsindrio havanana ary sokafy amin'ny "notepad" Raha milaza ny programa fa mila fahazoan-dàlana ianao hanao izany, dia tsindrio fotsiny ary tariho ny lahatahiry fiaramanidina rehetra mankany amin'ny birao mba hahafahanao manao ny fiovana.
Ity ohatra ity dia nongotako avy amin'ny De Havilland Beaver DHC2
Dingana iray manova ny lanjanao ambony indrindra
max_gross_weight = 5090 // (pounds) Ampitomboy ny 5090 ataon 2000 ka vakiany ny 7090
Dingana 2 Mampitombo ny faritaninao
engine_type = 0 // 0 = Piston, 1 = Jet, 2 = Tsy misy, 3 = Helo-Turbine, 4 = Rocket, 5 = Turboprop
Engine.0 = -0.15, 0.0, 0.0 // (tongotra) halavany, aoriana, halavirana avy amin'ny loharanom-pifandraisana
fuel_flow_scalar = 1.0 // scalar de fuel Ampifamadiho ny 1.0 fiovana isan-karazany ka novakiany 0.48
min_throttle_limit = 0.0 throttle farafahakeliny. Amin'ny ankapobeny ratsy ho an'ny turbine
Dingana 3 Ampitomboy ny herin'ny motera
power_scalar = 1.0 // scalar herinaratra piston
cylinder_displacement = 109.4 // Cubic santimetatra isaky ny cylinder
compression_ratio = 6.0 // Famaritana fampitahana
number_of_cylinders = 9 // Isan'ny cylinders
max_rated_rpm = 2300 // RPM nomena isa
max_rated_hp = 450 // HP nomena isa Max hanova ny 450 amin'ny isa ambony kokoa amin'ity tranga ity dia hanampy aho 200 hp ka lasa 450 650
Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao, ampahafantaro ahy